Qaybsanaantii TPLF oo Heshiis Laga Gaadhay – Rasaasa News
Labo koox oo ka mid ah sadexddii kooxood ee ay u kala jabtay TPLF ayaa heshiiyey, ka dib kolkii ay meesha ka baxday kooxdii saddexaad.
Waxaa heshiisiiyey TPLF Addis Ababa iyo TPLF Mekelle, waxaana meesha ka baxay kooxdii ay hogaaminaysay Azeb Mesfin (xaaskii raysal wasaarihii hore ee Atoobiya).
Bitew Belay oo hore u ahaan jiray la taliyaha Meles Zenawi, ahaan xubin golaha dhexe ee TPLF, ayaa ka shaqeeyey heshiiska labada kooxood.
Bilew Belay waxaa shaqada laga eryey 2001, eedayn la xidhiidha musuq. Xiligaas oo shaqada isna laga caydhiyey saaxiibkiis Seye Abraha oo ka mid ahaa madaxda TPLF iyo waliba EPRDF, ka dib kolkii uu ka horjeedsaday siyaasada TPLF ay ku socoto.
Bitew Belay hadda waa ganacsade, sida ay u badan yihiin xubnaha TPLF, ee shaqadooda waayey. Bitew Belay wuxuu ka walbahaaray cawaaqib xumada iska horjeedka dhexdoodu ay u keeni doonto in Tirgay awood yar ku yeesho talada maamul ee Atoobiya. Qaybsanaanta TPLF, kooxa Mekelle ee hogaamiyaha ka yahay madaxwaynaha degaanka Tigray, ahana gudoomiyaha TPLF Abaye Woldu, waxay sababi kartaa in ay wiiqanto awooda kooxda Addis Abab ee uu hogaamiyo Debretsion Gebremichael ku xigeenka Raysalwasaaraha Atoobiya.
Labadan koox ayaa hada ku heshiiyey in wixii iyaga dhexdooda ah meel la iska dhigo, loona jeedsado dhismaha sidii ay TPLF ku hanan lahayd jagada raysal wasaaraha doorshada 2015-ka, ugu yaraana ruux Tigray ah.